“အောင်ဆန်း”ရုပ်ရှင် စတင် ရိုက်ကူးခြင်း အခမ်းအနား / ဧရာဝတီ
ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီ ကီတာဇူမီ ကို ဧပြီလအတွင်းက စစ်အာဏာသိမ်း ကောင်စီက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ သူဟာ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဘေးကင်းစွာနဲ့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီက သူအင်းစိန်ထောင်မှာ ရောက်ရှိခဲ့စဉ် ဒါရိုက်တာ လူမင်းနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပြီး၊ လူမင်းက သူ့ကို ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများကို အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။
“ဒီနေ့ကတော့ ထောင်အတွင်း အကျဉ်းကျနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ကိုလူမင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြံပြုချက်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဒီရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးကို စီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒီရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးဟာ အကောင်အထည် ပေါ်ခဲ့ပါတယ်”
“ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အားလုံး ရိုက်ကူး ပြီးစီးသွားပါပြီ။ ကျနော် ဒီနေ့ ဒီအကြောင်းကို ပြောရတာကတော့ ကျနော် အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ ဒါရိုက်တာ လူမင်းနဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ကျနော် ကြားသိခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီက ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်း ကောင်စီဟာ ဒါရိုက်တာ လူမင်း မပါဝင်ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာကို သိရတဲ့အတွက် လူမင်းက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချတဲ့အကြောင်း အခုလိုပဲ ဆိုပါတယ်။
“အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ လူမင်း (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
“စစ်အာဏာသိမ်း ကောင်စီဟာ မေလမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ကော်မတီအသစ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဒါရိုက်တာ လူမင်း မပါဝင်ဘဲ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ကျနော် သိရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကတော့ အားလုံး ရိုက်ကူးပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် လတ်စသတ်နေတဲ့အဆင့် Post Production အဆင့် ဖြစ်နေပါပြီ”
“ဒါရိုက်တာ လူမင်း မပါလည်း သူတို့က ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းရာကို ဒါရိုက်တာ လူမင်းက အင်မတန် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချနေပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ကျနော့်ကို ကိုလူမင်းက အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက သူဘယ်လို ပြောလဲဆိုရင် ဒီလိုမျိုး လုပ်တာဟာ သူတို့ (စစ်ကောင်စီ)ရဲ့ မတရားလုပ်တာကို ကျနော် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး”
“ကျနော် ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘူးလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ စစ်ကောင်စီက ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကော်မတီ အသစ်ကနေ ရုပ်ရှင်ကို ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် သူတို့ စိတ်ကြိုက်သလို တည်းဖြတ် ဖန်တီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီဟာက အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် လုံးဝ လက်လျှော့ အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုလူမင်းက ပြောပါတယ်”
ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီ ကီတာဇူမီ ကိုယ်တိုင်က ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒီရုပ်ရှင်ကို စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝါဒဖြန့်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးချမှာကို စိုးရိမ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီ ကီတာဇူမီ
“ကျနော် ထင်တာကတော့ ကိုလူမင်းက ဒီဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ကို စစ်အာဏာသိမ်း ကောင်စီကနေ သူတို့ရဲ့ ဝါဒဖြန့်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးချမှာကို စိုးရိမ်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကျနော်ဟာ ဒါရိုက်တာ ကိုလူမင်းကို အရင်ကတည်းက သိနေတာပါ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်”
“ကျနော်ကတော့ ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ ဂျပန် စစ်ဗိုလ်ကြီးအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကျနော် ထင်တာကတော့ ကိုလူမင်းဟာ ကျနော်တို့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို သမိုင်းကြောင်း တိကျမှန်ကန်စွာ ရိုက်ထားတာကို ကျနော် မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့လည်း ဒီရုပ်ရှင်ကို စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝါဒဖြန့်ရုပ်ရှင် အဖြစ် အသုံးချခံရတာမှာကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
လူမင်းနဲ့ ယူကီ ကီတာဇူမီတို့ဟာ အင်းစိန်ထောင်က အဆောင် တခုတည်းမှာ အတူနေခဲ့ရပြီး လူမင်းက တခန်း၊ ယူကီ တခန်း သပ်သပ်စီလို့ သိရပါတယ်။
“ကျနော် ကိုလူမင်းနဲ့ အင်းစိန်ထောင်မှာ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ အဆောင်အတူတူပဲ နေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က တခန်း၊ သူက တခန်းပေါ့နော်။ ကျနော်က ထောင်ထဲမှာ ဝင်ခါစတုန်းက အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အပြင်ကို လမ်းထွက်လျှောက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့်ရဲ့ အဆောင်ထဲက အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ အသံကြားရပါတယ်”
“အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ “I’m Lu Min. I’m okay. If you need any help, please tell me.”(ကျနော်က လူမင်းပါ။ ကျနော် အဆင်ပြေပါတယ်။ ခင်ဗျား အကူအညီတခုခု လိုအပ်ရင် ကျနော့်ကို ပြောပါ) ဆိုပြီး ထောင်အကျဉ်းခန်းလေးကနေ ကျနော့်ကို လှမ်းပြီးတော့ ပြောပါတယ်”
“ကျနော်က ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ထောင်အကျဉ်းခန်းလေးဟာ အပြင်ခန်းကနေ သူ့ရဲ့ မျက်နှာကို မမြင်ရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီထောင်ရဲ့ တံခါးမှာ ၃ စင်တီမီတာလောက် ရှိတဲ့ အပြင်ကို ချောင်းကြည့်လို့ရတဲ့ မျက်လုံးပေါက်လေးလောက် ကျယ်တဲ့ အပေါက်ကို တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီ အပေါက်ကနေ ကိုလူမင်းကနေ ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ယူကီက ပြောပါတယ်။
လူမင်းက သူ့ကို မှတ်မိပြီး ဂရုတစိုက် နှုတ်ဆက်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာခဲ့ရပြီး လူမင်းရဲ့ ရင်ဖွင့်သံကို အပြင်မှာ Speak Out လုပ်ပေးနိုင်တာ သူတယောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ယူကီက ဆိုပါတယ်။
“ဒါရိုက်တာ လူမင်းက ကျနော့်ကို မှတ်မိနေပြီး ဂရုတစိုက်နဲ့ လှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့အတွက် ကျနော် ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် လည်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ထောင်ထဲမှာဆိုရင် ကိုလူမင်းဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ သူ့အနားမှာ ရှိတဲ့လူတွေကို ပျော်ရွှင်အောင် သူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လမ်းသေးသေးလေးမှာ ကိုလူမင်း အပြေးလေ့ကျင့်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်”
“ဒီလို ကျနော် ဒါရိုက်တာ လူမင်းရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်အသံကို ကြားခဲ့ရတာ ကျနော် တယောက်တည်းပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျနော်က သူ့ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံကို အပြင်မှာ Speak Out လုပ်ပေးနိုင်တာ ကျနော် တယောက်ပဲ ရှိပါတယ်”
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာက သရုပ်ဆောင်မယ့် ကျော်ကျော်မျိုးနဲ့ နန့်ဇာခြည်လင်း (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
“တကယ်လို့ ဒီရုပ်ရှင်ကို စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီက ဒါရိုက်တာ လူမင်း မပါဝင်ဘဲ သူရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို လက်စသတ်ပြီး တည်းဖြတ် ထုတ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်၊ ရုံတင် ပြသလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံရေးဝါဒဖြန့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ လုံးဝ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး ပြည်သူတွေကလည်း ဒီရုပ်ရှင်ကို Boycott (သပိတ်မှောက်) ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကို ပိုပြီး ဆန့်ကျင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
“ဒါရိုက်တာ လူမင်းအပါအဝင် ဒီရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင် ပြည်သူအများရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အပြည့် ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်ရပြီး၊ ကိုလူမင်း အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ထွက်လာပြီး ကိုလူမင်း စိတ်ကြိုက် ဒီရုပ်ရှင်ကို ပြန်ပြီး ဖန်တီး လတ်စသတ်ပြီးမှ ပြည်သူတွေကို တင်ပြစေချင်ပါတယ်”လို့ ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီ ကီတာဇူမီက ပြောထားပါတယ်။
Topics: ဂျပန်သတင်းထောက်, စစ်ကောင်စီ, ဒါရိုက်တာ, ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်, လူမင်း, အင်းစိန်ထောင်